Maalinta: Juun 27, 2015
Muuqaal qalbi jab leh oo xamaam oo ku yaal Saldhigga Tareenka ee Kayseri: Buulkii qoolleyda saqafka saqafka ayaa la xiray iyadoo ay ugu wacan tahay dayactir lagu sameeyay saqafka xarunta tareenka ee Kayseri. Qaar ka mid ah xamaamyada waxay ku nagaadaan bannaanka, halka kuwa kale ee qoolleyda leh mesh silig [More ...]
Burulaş oo ka tirsan burcad badeedda oo leh xalal gaadiidka badda iyo badda
Burulaş, xiddigga Bursa oo leh xalka gaadiidka badda iyo hawada: Waxay adeegyo u fidisaa gaadiid raaxo leh oo taga Bursali iyadoo la raacayo nidaamka tareenka, baska iyo taraamka ee gaadiidka magaalada. [More ...]
Baaritaannada Amniga ee Balcova Xarumaha Gawaarida Dhabarka la Dhameeyay (Sawir Sawir)
Imtixaannada amniga ee Balçova Teleferic Facilities waa la dhameystiray: Tijaabooyinka amniga ee Balçova Teleferic Facilities oo dib loo aasaasay degmada polzmir ee Magaalo Weyn ayaa si guul leh loo soo gabagabeeyey waxaana loo baahan yahay oggolaansho laga helay hay'adda caddeynta caalamiga ah ee madax bannaan. Aagga loo yaqaan buur [More ...]
Waxaa la tijaabiyay xarumaha Balilitiesova Ropeway Facilities: Imtixaanada amniga ee Balçova Ropeway Xarumaha dib loo aasaasay Dowlada Hoose ee Magaalada 'Metropolitan Dowlada ayaa si guul leh lagu soo gabagabeeyey waxaana loo baahanyahay in laga soo ansaxiyo qeybta shahaadada madaxa banaan ee caalamiga ah. Aagga loo yaqaan buur [More ...]
Maanta taariikhda: 27 June 1939 Hadimkoy iyo Geliboluda decovil
Taariikhda Maanta 27 Juun 1939 Guuto guuto ah oo loo yaqaan 'decovil battalion' ayaa laga sameeyay markii la daadiyay maydadka Hadımköy iyo Gallipoli. II. Ciidamada tareenka ee Turkiga inta lagu gudajiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka; Xawaaladda iskuxirka tareenka ee 4 [More ...]